प्रदेश नम्बर ४ को मुख्यमन्त्रीमा पृथ्वीसुब्बा गुरुङ
Sun, Aug 19, 2018 | 13:43:54 NST
17:20 PM (6months ago )
कास्की, माघ २८ – प्रदेश नम्बर ४ को मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ हुने निश्चत भएको छ । प्रदेश नम्बर ४ मा एमाले संसदीय दलको नेता चुनिएसँगै गुरुङ्गलाई मुख्यमन्त्री बन्न बाटो खुलेको हो ।
ख्यमन्त्रीका लागि एमालेमा पृथ्वीसुब्बासँगै प्रदेश इन्चार्ज किरण गुरुङ को दाबी थियो । तर किरणले उम्मेदवारी नदिएको कारण सहमति मै पृथ्वीसुब्बालाई मुख्यमन्त्री बनाउने निर्णय भएको हो । लमजङ ‘ख’ बाट प्रदेशसभा सदस्यमा विजयी गुरुङ क्ब्होलासोंथर गाउँपालिका–९ टक्सार, लमजुङका बासिन्दा हुनुहुन्छ ।
को हुन् पृथ्वीसुब्बा गुरुङ ?
बुबा स्व.गंगाप्रसाद गुरुङ र आमा स्व. चिनी गुरुङ्गको कोखबाट २०१४ फागुन २ गते लमजुङको क्व्होलासोंथर गाउँपालिका-९ मा जन्मनु भएका गुरुङ सानै देखि राजनीतिमा रुचि राख्ने व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो । गृह जिल्लाकै इशानेश्वर प्रमोद हाइ स्कुल, भोर्लेटारबाट २०३० सालमा एस.एल.सी दिनुभएको गुरुङले अमृत साइन्स क्याम्पस काठमाडौंबाट २०३४ सालमा विज्ञान विषयमा स्नातक तह पास गर्नुभएको हो ।
२०२७ सालमा इशानेश्वर प्रमोद हाइ स्कुल, भोर्लेटारमा रहँदा अनेरास्ववियूको तर्फबाट स्ववियू सचिवमा निर्वाचित भएपछि उहाँ औपचारिक रुपमा राजनितिमा लाग्नुभएको हो । २०३५ सालमा मध्य–उत्तर इलाका पार्टी सक्रिय दल नेकपा (माले) लमजुङको सदस्यको रुपमा संगठित हुनुभएका गुरुङ २०३७ साल फागुन ७ गते नेकपा (माले) को पार्टी सदस्यता प्राप्त गर्नुभएको थियो ।
उहाँ २०४८ मा भएको प्रथम जिल्ला अधिवेशनबाट नेकपा (एमाले) जिल्ला कमिटी सचिवमा निर्वाचित हुनु भएको थियो । २०५४ मा नेपालगञ्जमा भएको पार्टीको छैटौं महाधिवेशनबाट नेकपा (एमाले) केन्द्रीय कमिटीको बैकल्पिक सदस्यमा निर्वाचित हुनु भएका गुरुङले २०५४ देखि २०५९ सम्म गण्डकी अञ्चल समन्वय कमिटीको सचिव भएर जिम्मेवारी सम्हाल्नु भएको थियो । गुरुङ २०६० मा नेकपा (एमाले) केन्द्रीय कमिटी सदस्यमा मनोनित हुनुभएको थियो ।
२०६४ सालको संविधान सभाको चुनावमा नेकपा एमालेबाट लमजुङ क्षेत्र नम्बर २ बाट विजयी हुनुभएको थियो । तर संविधानसभा चुनाव २०७० मा भने उहाँ कांग्रेसका उम्मेदवारसँग ६ सय ७२ मतले पराजित हुनुभएको थियो ।
प्राविधिक कारणले चुनाव हारे पनि उहाँ जिल्लाको विकाशका लागि सधै खटिने नेताको रुपमा चिनिनु भएको थियो । २०७४ मंसिर १० मा सम्पन्न भएको प्रतिनिधि तथा प्रदेशसभा निर्वाचनमा लमजुङ ‘ख’ बाट प्रदेशसभा सदस्यमा निर्वाचित हुनुभएको थियो ।